‘दुई रुपैयाँ’ले काट्यो करोडको केक ! | THE CINEMA TIMES
NepalNews Author:	The Cinema Times - Jul 17, 2017
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । भदौ २३ गते रिलिज हुने सिनेमा ‘दुई रुपैयाँ’मा समावेश एउटा गीत अहिले सर्वाधिक हिट छ । राजनराज सिवाकोटीको शब्द/संगीत र स्वरमा सजिएको ‘कुटुमा कुटु’ बोलको गीतलाई सबै खालका श्रोता तथा दर्शकले मन पराएका छन् ।
त्यसैले पनि यो गीतले युट्युबमा रेकर्ड राख्न सफल भयो । छोटो समयमै करोड माथि भ्यु कटाएको यो गीतसँगै संगीतकार राजनराज सिवाकोटी ‘के’ टाउनमा ‘हट केक’ बनेका छन् । उनलाई अहिले बधाईको ओइरो छ । ढाई करोड बढी जनसंख्या भएको देशमा कुनै पनि भिडियोले करोड माथिको भ्यु पाउनु चानचुने कुरो होईन ।
तर, यहाँ राजनराजका शब्द/संगीतले युट्युबमा ह्याट्रिक नै गरेका छन् । त्यसैले उनि यो समयमा सबै तिरबाट बधाई थापिरहेका छन् । ‘कुटुमा कुटु’को सफलतालाई मध्येनजर गर्दै ‘दुई रुपैयाँ’ युनिटले सोमबार राजधानीमा सेलेब्रेसन पार्टी दियो । सिवाकोटीले मिडिया र ‘दुई रुपैयाँ’ टिम अगाडी ‘कुटुमा कुटु’ करोड भ्युको केक काटे । त्यसमा उनलाई साथ दिए सिनेमाका कलाकार र अर्का ह्याट्रिक म्यान कविराज गहतराजले ।
गहतराजद्वारा नृत्य निर्देशित भिडियोले यो गीतसँगै तिन पटक करोड माथिको भ्यु पाएका छन् । सिवाकोटीले यसअघि ‘पुर्व पश्चिम रेल’ र ‘सुर्के थैली हिट दिसकेका छन् । त्यस्तै गहतराजले ‘काले दाई’ र ‘पुर्व पश्चिम रेल’का नृत्य निर्देशन गरेका थिए । जुन गीतहरु युट्युबमा करोड भन्दा माथि हेरिएका छन् ।
असिम शाह निर्देशित सिनेमा ‘दुई रुपैयाँ’मा असिफ शाह, निश्चल बस्नेत, बुद्दी तामाङ लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
Tags:kabiraj gahatraj, nishchal basnet, raajan raj siwakoti
‘दुई रुपैयाँ’ले काट्यो करोडको केक !0out of5based on0ratings.0user reviews.
MYGG: चार दिने कलेक्सन, शुक्रबारबाट अन्य हल थपिने !
Nepal	Jul 30, 2017
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । भदौ २३ मा रिलिज हुने ‘दुई रुपियाँ’ पछिल्लो समय चर्चामा…
Nepal	Jul 27, 2017
‘2 रुपियाँ’मा करोडौको खेल ! कसरी ? (ट्रेलर)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । असिम शाह निर्देशित सिनेमा ‘2 रुपैयाँ’को ट्रेलर रिलिज भएको छ…
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । सिनेमा ‘दुई रुपैयाँ’मा समावेश ‘कुटु मा कुटु’ बोलको गीत गीतले…